Crowdfunding yeDiskio Pi, Tab Kit yeiyo Raspberry Pi uye ODroid | Linux Vakapindwa muropa
Iyi purojekiti inovavarira kutora aya madiki macomputer uye oashandura iwo ekudzidzira kodhi michina kana media media kudzora yako epamhepo otomatiki, asi Diskio Pi inogona zvakare kushandiswa kushandura chishandiso chako kuva Hwendefa kana kugadzirira mota yako.
Kunyangwe iri zvakare Diskio Pi inovavarira kusvika kune vagadziri uye nyanzvi dzinoda hombe yekubata skrini.
Iyo yekutanga prototype yeDiskio Pi ndeye mhedzisiro yekuzadzikiswa kwechiratidziro, pamwe nekubatanidzwa kweiyo Orange Pi uye bhatiri. Izvi ndizvo zvaunogona kuita:
Se ngowani, laptop inotonhorera chassis yaishandiswa, ichibvisa mafeni uye kutsetsenura zvese zvakapfuura. Iyo yepamusoro furemu inodhindwa mu fablab.
Musimboti weiyi prototype yakafanana neiyo yekupedzisira: magetsi akajairika, imbwa inoshandura 12V (kana 9V) kuita 5V, mabhatiri anobhadharisa 12V uye anopa 5V.
Zvese zvinowedzeredzwa neiyo powered HUB uye vhidhiyo kadhi, iyo inosangana nePC kadhi kuburikidza neHDMI.
1 CAD 0.3 prototype
1.1 Chigadzirwa chakarongerwa mu presale.
1.2 Nei kit?
1.3 Iyo montage
1.4 Spare zvikamu
CAD 0.3 prototype
Kune CAD, chikamu chega chega chinoenzanisirwa neyakajeka ye1 / 10 mm. Mataiti emagetsi uye avo makuru makuru anoteedzerwawo.
Mhedzisiro yacho igungano chairo rinofanirwa kushandisirwa uye kutaridzika kubva kumativi ese, pasina kukanganwa chero chinhu. Uye zvinotora nguva yakareba.
Iyo CAD yakatumirwa kune plasturgist muChina yekugadzira. Kuchengetedza zvakanyanya sezvinobvirae, kuwedzera kune icho icho chakasarudzwa kuti chiitwe chena ABS, kuti gare gare chinja kune acrylic pendi.
Hinji yekuvhara hood iri nyore kwazvo, inogona kukurumidza kuvhurwa nekuvharwa ne3 screws. Rutsoka runotsiviwa uye runoshandiswazve runoshanda futi, kunyange hazvo kusimudzira kuchizofanira kuitirwa kuti ikuburitse neruoko uye kurega iyo GPIO ichitenderera.
Kune vhezheni 1.0, mamwe ma prototypes (0.3.1 uye 0.3.2) anozoda kugadzirwa pamberi pekugadzirwa kwakawanda.
Chigadzirwa chakarongerwa mu presale.
Chigadzirwa chekupedzisira chichava kit, ine zvidimbu zvese zvinodiwa kuita yakakwira tsananguro yekubata skrini, 13'3 uye inoenderana nano makadhi emaPC akadai seRaspberry Pi kana Odroid. Iyo kit ichave nemamepu atozadzwa mukati, hazvizove zvakakosha kuwelda kugungano.
Vanogona kutenga vatengi vagara vanoziva nezve mabhodhi ekuvandudza, saka vanogona kuvaka yavo kifaa.
Isu tese tinoziva kuti mazhinji emagetsi akaraswa ari kusvibisa. Kana mushandisi achiziva kukwirisa chishandiso, ivo vanokwanisa kuchikwatanura uye nekudaro kuchigadzirisa zviri nyore kana chinhu chikakuvadzwa.
Nekuda kwehupfumi: pane mutengo wekusangana, uyo unozoponeswa (zvisinei, unozokanganiswa nekupakata).
Yekupedzisira chishandiso ichave yakasanganiswa desktop desktop, yakagadzirira kugara Raspberry Pi 1/2/3 B / B + kana Zero, asi zvakare Odroids C1 + / C2 / XU4.
Chero imwe Raspberry Pi fomu chinhu kadhi inotsigirwawo, kana simba rako risingapfuure 5V uye 4A.
Diskio Pi inogona zvakare kushandiswa seyakazvimiririra kuratidzwa kune iyo laputopu kana mutambo mutambo, ine resolution ye 1920 × 1080.
Iyo gungano haizodi ruzivo rwakakosha, kutenderera (kunze kwekunge zvakanyanya). Iwe uchazoda chigero, cheka, uye ribhoni.
Iyo kit ichaendeswa neke diki screwdriver uye yakapetwa-mativi roll yekumisa iyo skrini (inosanganisira iyo chaiyo skrini uye yekubata girazi).
Imwe tambo ine kiyi yakasiyana yekuwedzera kuchengetedzeka. Semuenzaniso 9V, 7.4V uye 5V magetsi emagetsi achave neakasiyana chinongedzo.
Zvakare, ichauya ne2 bhatiri mapakeji. Pakeji yega yega ine maviri maseru, iyo 2-cell vhezheni ichave iine maviri mapakeji uye matanhatu-maseru vhezheni e4 mapakeji
Kana iwe uchida kuziva zvishoma nezvazvo kana uchifarira kutsigira chirongwa ichi, unogona shanyira chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Crowdfunding yeDiskio Pi, Tab kit yeiyo Raspberry Pi uye ODroid
Dambudziko nderekuti raspi ine 1 GB ye RAM haina kukodzera kuti ishandiswe sekombuta yakajairwa nekuti iyo RAM ndeye bhodhoro.
Ndine Pi 3 B uye ine bhurawuza ine ina tabo uye maviri akavhurika emahara mapepa ekushandira ayo anonamira. saka chokwadi hapana imwe nzira.
Zviri pachena kuti kana ukazviona nenzira iyoyo hauzombowana kugutsikana Muchiitiko changu ndinozviona sechisarudzo chakanakisa, kuve nekutakurika kwechigadzirwa changu icho mune yangu kesi ndinoishandisa neRecalBox, Kali Linux uye libreelec.